အိပ်ခန်း တစ်ခန်းကိုဘယ်လိုထားသင့်သလဲ? - Phoenix Emperor
Home / Blog / အိပ်ခန်း တစ်ခန်းကိုဘယ်လိုထားသင့်သလဲ?
28ဇူ 2019 by admin
တစ်နေ့ကုန်ပင်ပန်းနွယ်နယ်တာတွေက အိပ်ယာပေါ်ကို လှဲချလိုက်တာနဲ့ တစ်ဝက်လောက်သက်သာသွား တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ခန်းက အနံ့သက်မကောင်း၊ ညစ်ပတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုပိုပြီး စိတ်ပင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအိပ်ခန်းကိုအသစ်စက်စက်အခန်းမှာ ပြောင်းနေလိုက်ရသလို ခံစားမှုကိုရရှိစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။